Ọ dị njọ iri nri ụtụtụ n'abalị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nri ụtụtụ n'abalị - ihe ngwọta dị irè
Nri ụtụtụ n'abalị - ihe ngwọta dị irè
Ọ dị njọ iri nri ụtụtụ n'abalị?
Ihi ụra ka mma
Enweghị ihe akaebe na obere obere nri dị mma tupu ị lakpuo ụra na-eduga n'uru ibu. Naanị iburu n'uche ka oriri calorie gị kwa ụbọchị. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị gị otú ahụna-eri nriihe tupu ihi ụra na-enyere gị aka ịda n'ụra ma ọ bụ ihi ụra, ọ bụỌ DỊ MMAime ya.Sep 24 2020
I nwere ike iche n’ajụjụ anyị na-ajụ taa dị ka ihe ịtụnanya. Kedu otu nri niile nwere ike isi dị njọ nye gị? Ezigbo ihe kpatara anyị ji ajụ ajụjụ a bụ maka ọtụtụ mgbe a na - agwa anyị na ihe dị mma maka anyị ma mesịa gwa anyị na ọ dị njọ maka anyị. Anyị na-eleba anya na akwụkwọ na-agba mmụọ ụfọdụ nri na ntanetị naanị iji chọpụta na ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị agbahapụla ọtụtụ ozi na akwụkwọ ahụ.
O nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya ịmata ihe dị mma maka anyị n'ihe metụtara nri anyị. Nnukwu esemokwu bụ iri nri abụba, ihe a gwara anyị kemgbe ọtụtụ afọ bụ ụzọ ziri ezi anyị ga-aga, na afọ ndị na-adịbeghị anya a gwara anyị na Ndị abụba ọjọọ dị ugbu a dị mma n'ime nri, na nke a nke Infographics Show, Nri niile ọ dị njọ maka gị? Ka anyi bido na kabohaidret, nihi na n’oge ugbua, a gwara anyi na obu nri ndi juputara na carbohydrates n’eme ka anyi buru oke ibu. O yiri ka agbapụtala nri nwere abụba site n’ihe ọjọọ.
Nke mbụ, nkwenye zuru oke n'ebe ahụ bụ na ọ bụrụ na ị belata nri calorie gị ma na-eme mmega ahụ ọzọ - yabụ na ị nwere calorie deficit - mgbe ahụ ị ga-efufu ibu ma ọ bụ buru ibu ị chọrọ ịnọ. Otutu ndi mmadu ekwenyeghi na nke a. Ma carbohydrates nwere ike ịdị elu na calorie, ma ka ha na-eme ya, kwuru na ndị okenye kwesịrị ịnweta 45-65% nke calorie ha site na carbohydrates.
Nri a na-eri kwa ụbọchị na nri ndị na-adị ọcha dị ka achịcha, osikapa ọcha, pasta, ihe ọ sugụ sugụ shuga, na ụdị nri dị iche iche nwere ike ịkarịrị gị ọbara shuga, anyị achọghịkwa nke ahụ. Nwere ike ịnweta carbohydrate gị site na akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, ma ọ bụ agwa na ọka. Ya mere ee e, ọ dịghị ihe dị njọ na carbohydrates, mana ọ ka mma ịnwe nri agwakọtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ibu, gbalịa ka ị ghara ịnwe nri dị elu, nke nwere nnukwu nri ugboro atọ n'ụbọchị.
Mfe. Maka achịcha ọka niile ma e jiri ya tụnyere achịcha ọcha, nke mbụ nwere eriri karịa na ndepụta insulin glycemic dị ala, nke na-egbochi insulin ukwuu ịpụpụ. Mana kalori ọdịnaya yiri na ị nwere ike were eriri gị site na nri ndị ọzọ.
A naghị ele ya anya dị ka nhọrọ dị mma, ọbụlagodi na enwere ike ịre ya n'ụzọ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịta ahụ, dobe onwe gị na nnukwu sandwiches nwere oke zuru ezu maka inyinya nye onye ọjọọ mbụ nri: abụba. Abụba na-eme ka ị maa abụba, ọ bụghị ya? Nke ahụ yiri ka ọ bara uru ma ọ dịkarịa ala asụsụ.
N’ezie, onwere otutu ihe omumu nke ugbua n’agwa anyi na oburu n’abughi, abuba adighi eme ka i buru ibu. Ihe oriri anyị adịchaghị oke na kalori, na ị choụ cholesterol adịchaghị eduga n'ọkwa ọkwa dị elu. N'ezie, a na-agwa anyị ugbu a na anyị chọrọ ọtụtụ abụba dị mma na nri anyị yana na ịzere ha n'oge gara aga nwere ike imerụ anyị ahụ karị enyerela anyị aka.
Kedu abụba dị mma? Agwara anyị na abụba abụba na polyunsaturated abụba ị nwere ike ịchọta azụ, akụ, mkpụrụ, na akwukwo nri mmanụ dị ka oliv na mmanụ sunflower. Abụba ndị na-adịghị mma bụ ihe anyị na-akpọ abụba 'trans', a na-ahụkarị ha n'ihe ọma niile dị ka kuki, donuts, achịcha, ihe ndị e ghere eghe, na ụdị nri niile esiri esi. A maara abụba ndị a dị ka 'abụba ndị na-emepụta ihe na-emepụta' ma dị ọnụ ala, ọ bụ ya mere eji eji ha.
Emere ha site na ịgbakwunye hydrogen na mmanụ ihe oriri mmiri, enwere ike ịchọta ihe akaebe na ha dị njọ ma ọ bụrụ na ha rie nri na ọ bụ ya mere eji eji ha eme ihe ugbu a. Banyere abụba zuru oke, ihe ị hụrụ n'ọtụtụ nri mara abụba dị ka anụ, bọta, na cheese, ọbụlagodi ndị a akpọghị aha ha oke oke njọ. Mana anyị kwesịrị ikwu na ọtụtụ isi mmalite anyị nwere ike ịchọta gwara anyị rie ha na-enweghị oke.
Ugbu a gaa akwa a na-atụ ụjọ! You na-echeta akụkọ ndị ahụ jọgburu onwe ya gbasara nkochi ime akwa nke mere ka ụlọ nri jupụta ebe niile n’ụwa? akwa omelette n’elu menu gị? A chọpụtala ọtụtụ ihe na-egosi na nkochi ime akwa adịghị mma. Nnyocha egosiwo na na ndị ahụike, ị ,ụ nsen 1-6 kwa ụbọchị anaghị emetụta cholesterol na ahụ gị. Otú ọ dị, ghọta na ọ bụrụ n’inwe nri na-adịghị mma nke jupụtara n’ọbara ndị na-adịghị mma, ị ofụ àkwá kwa ụbọchị nwere ike imetụta ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara nke cholesterol na lipoproteins n’ụzọ na-adịghị mma.
Mgbe a jụrụ ma àkwá adịghị mma, otu dibịa Harvard zara, sị, “Site n’ihe anyị maara taa, isi okwu bụ nke a: Nye ọtụtụ ndị, otu akwa kwa ụbọchị anaghị eme ka ọrịa nkụchi obi, ọrịa strok, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ dị elu. ọrịa Ọrịa obi. ”Otú ọ dị, ọ sịrị na ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ na ị nọrọla n’ihe ize ndụ nke ọrịa obi na ị gaghị eri ihe karịrị àkwá atọ n’izu. Nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu n'oge a, akwa dị mma, ya mere jikere ma nwee omelette edo edo.
Kedu maka nnu, mmụọ ọjọọ ọzọ nke ụwa nri? Ọ dị mma, nnu bụ ịnweta dị mkpa maka nri gị. Ihe bụ nsogbu bụ, nnyocha na-egosi na anyị na-eri oke nke ya. Nke a apụtaghị na ị nwere ike iwepụta nnu nnu maka ọka gị, mana nnu ahụ adịla n'ọtụtụ nri, ọkachasị nri esichara nke nwere flakes ọka! Ọ bụrụ na ị nwere ọbara mgbali elu ị nwere ike ịhapụ nnu, mana nke a nwere ike ịpụta ịbelata ụfọdụ nri esichara.
O yikarịrị ka sodium dị ukwuu ọ nwere ike ime ka ọbara mgbali elu gị rịa elu nke ukwuu, a nabatakwara nke a n'ọtụtụ ebe. Nnyocha egosiwo na site n'iwepụ nnu kpamkpam na nri, ndị mmadụ anaghị adị mma. Banyere nnu hipster, ugwu ugwu Himalaya a na-egwupụta na Pakistan, ndị juri (ya bụ sayensị) ka na-ekpebighi ma ọ kaara gị mma karịa nnu ndị ọzọ.
Oké sayensị asị mba, ọhụrụ afọ ọhụrụ ahụ ike ọkachamara kwuru ee. O doro anya na ọ dị ezigbo ụtọ. Echiche ụgha ọzọ bụ na ngwaahịa oyi ma ọ bụ nke mkpọ na-atụfu ụfọdụ n'ime nri ha n'ihi na ha arụ ọrụ, mana anyị enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla na-agwa anyị na nke a bụ eziokwu.
N'ezie, ọ bụghị eziokwu, n'agbanyeghị na enwere ike inwe obere esemokwu na uru nri. N’ọnọdụ ụfọdụ, anyị achọpụtala na akwụkwọ nri oyi ma ọ bụ nke mkpọ nwere ike ịnwekwu nri karịa nihina nri ndị dị na nri bụ oyi. Etu ị si esi ya ọ dịkwa mkpa, kedu ka ọ ga - esi sie n’elu c iji tufuo ihe dị mma.
Ma gịnị banyere nri anyị? Enwere ọtụtụ ozi na isiokwu a ụbọchị ndị a, ụfọdụ nri nri na-agwa anyị na anyị kwesịrị ibu ọnụ ebe ndị ọkachamara ndị ọzọ na-agba anyị ume ka anyị rie ọtụtụ obere nri ọtụtụ oge n'otu afọ. Nationallọ Ọrụ Ahụ Ike Mba nke United States tinyere nke a n'ule ma kwupụta, sị, 'Nri na-enweghị nri a na-erikarị nwere ike ime ka ahụike anụmanụ na ụlọ nyocha ka mma ma gbatịkwuo afọ ndụ, mana enwetabeghị mmetụta ọ na-enwe na ụmụ mmadụ. Ha nwalere mmadu, ha choputara na ogaghi adi ka ugboro iri nri.
Ihe dị mkpa bụ kalori oriri. Ọ dị ka ọ bụrụ na ị nwere obere nri isii ma ọ bụ nnukwu nri abụọ na calorie na-agakọ, ahụ gị agaghị agbanwe etu ị si eri, ọ bụghị otu ị ga-esi eri. Nke a na-ewetara anyị ruo n’itinye nri ụtụtụ.
Nke ahụ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ka ọ bụ ezigbo ihe? Isi mmalite ndị anyị nyochapụtara gụpụtara ọmụmụ gbasara isiokwu a nke kwuru na ọ bụ maka etu ọ dị gị na nri ụtụtụ adịghị mkpa iji jigide ahụike dị mma, mana isi mmalite ahụ kwuru na ọ dị iche maka onye ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ na ugbu a ibu ibu, inwere ike inwale. Otu ihe ahụ bụ maka iri nri n'abalị. Ọ bụchaghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị nọ na nri na-adịghị oke calorie.
Ọ bụrụ n ’iribiga nri ókè mgbe ahụ ee ọ nwere ike ịbụ ihe ọjọọ. Ndị Briten a ga-agwa gị na pint 8 nke biya na nnukwu kebab na ngwụsị nke mgbede yiri ka ọ na-enye ọtụtụ ndị mmadụ ezigbo nnukwu tummies. Ya mere, ebe ị na-aga, azịza maka nri ahụike nwere ike ịbụ imeru ihe oke na ọtụtụ nri Nri bụ.
Can nwere ike ịnweta achicha gị wee rie ya, mana ị nweghị ike ibupụta ya na achicha. Can nwere ike ma kwesịrị inwe abụba, dị ka obere nke gị cheese, mana mega Pizza dị ike dị elu na calorie. Na-etinye nri gị.
Tụfuo ụfọdụ anụmanụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ma echegbula. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ifelata, ị ga-emega ahụ wee bido ịgụ calorie. Enwere akwụkwọ akụkọ dị mkpa dịka 'Ihe Ahụ Ike' nke na-agwa anyị ihe anyị kwuru taa ezighi ezi na ndị mmadụ nwere ike ịga nri.
Mana ndị mmadụ na-ekwupụta ụfọdụ eziokwu ewepụtara na akwụkwọ akụkọ ahụ dịka ihe siri ike. N'otu oge ahụ, ihe mmụta sayensị dị na ya, yana akụkọ ndụ n'ezie, ọ dị ka ọ na-egosi anyị na iri ọtụtụ akwụkwọ nri na ịghara iji nri iri nri mee ihe dị mma. Site na ọrịa obi, ọrịa shuga, na oke ọrịa na-enweghị esemokwu, ụlọ ọgwụ na ebe Walmart na-adọba ụgbọala bụ ihe akaebe nke ịbụ ezigbo nri iji dị mma mana rie amamihe ma ghara ịnụ ụtọ nke ukwuu.
Yabụ kedu ka ị ga-esi debe nke gị? Ibu A Na-achịkwa? Debanye aha na ụdị ejiji ndị a na-abịa ma na-aga? Ka anyị mara na ihe! Ọzọkwa, dị njikere ịlele edemede anyị ọzọ akpọrọ Vegans na Meat Eaters - Onye Ga-adịte Aka? na! Daalụ maka ikiri na dịka echefula ịmasị, ịkekọrịta na ịdenye aha. Ruo oge ọzọ!
Kedu ihe a na-akpọ nri ụtụtụ n'abalị?
Ma na lexically na gastronomically, brinner bụ njikọ nkenri ụtụtụna nri abalị. Ọ bụ echiche nke iri nrinri ụtụtụnri dị ka isi nri gị na mgbede, yabụ abụchaghị otu brunch (nke a na-erikarị ya n'isi ụtụtụ ma na-atụkarị anya na ị ga-eri nri, 'kwesịrị ekwesị' ma emechaa ụbọchị).Ọnwa Ise 12, 2015
Otu nwatakiri riri vitamin gmy 150 maka nri ututu. Nke ahụ mere ọkpụkpụ ya. TJ bụ nwatakịrị nwoke dị afọ 14 nke na-ewetara ụlọ mberede na adịghị ike akwara, mgbu afọ, na ogwe aka gbajiri agbaji.
Ọ na-agafe tupu ọ banye na coma n'ihi ndị ọrụ ụlọ ọgwụ. Oge opupu ihe ubi, TJ na nne ya ezuola. Mgbe TJ si n’ụlọ akwụkwọ lọta kwa ụbọchị, TJ hụrụ nna ya ka ọ na-akpọnwụ n’abụma mmanya, nna ya na-apụ ịzụta ihe oriri.
Ọ hụghị nna ya ọzọ. Nwanyị naanị ya na-azụ ụmụ nọ na-atụle ịkwaga Amerịka, ya mere ha abụọ gara nnukwu obodo ịga leta ya. Ha abughi ogbenye, ma ha adighi asụ bekee, ha amaghikwa na ihe pere mpe ebe a karịa n'ụlọ.
TJ bụ onye na-akwado candies gummy kemgbe ọ bụ nwata. Ọ chọsiri ike ịhụ etu ha si detụ ire na America, ya mere nne ya zụtara ya ọtụtụ karama, otu karama adịghị ka ọ dị m n'anya, mgbe ha chere na ihe niile kwesịrị ịbụ ọmarịcha America. Kwa ụbọchị ọ na-eri 30-40 iberibe n'amaghị na swiiti ahụ bụ vitamin n'ezie.
Ka ụbọchị na-aga, nne TJ hụrụ na afọ ya na-aza aza. N'ụlọ ha na-egwuri egwu mgbe niile na nri ndị America na-eme ka ị bụrụ abụba, yabụ enwere ike iri obere obere, ka ọ chere. Otu ụtụtụ, mgbe ị na-elele isiokwu ole na ole, TJ mepere karama bekee ọhụrụ wee rie anụ goms 150 niile n'amaghị ama.
Ọ dịghị ihe gbagwojuru ezigbo nri ụtụtụ, ka ọ chere. Ihe dị ka otu elekere iri mgbe anyị risịrịchara karama vitamin gummy niile, TJ enweghị ike ịkwụsị mmamịrị. Ọ na-amalite iti mkpu na mgbu.
Ọ na-arịa oke mgbu afọ ma na-agwa nne ya na ọ dị ya ka otu nnukwu rọba na-amịkpọ ya. Ihe mgbu a nke epigastric na-amalite ịpị n'ime akpịrị ya. Nne ya na-anwa ịtọgbọ ya, TJ na-aga, daa ma gbajie ogwe aka ya.
Abụọ na-akpọ maka enyemaka. N'ime ụgbọ ala ahụ, TJ na-agbọ agbọ ma na-ama jijiji site na mberede ya mgbe a gbagara ya n'ụlọ mberede ebe anyị nọ ugbu a. Mgbe ha rutere, nọọsụ na-anata nyochara okwu TJ n'ihi na ọ chere na ọ bụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji.
Ma mgbe ọ dabara na amaghị onwe ya, a na-elebara ya anya ozugbo. Ọkpụkpụ ndị agbajiri bụ nanị ihe ịrịba ama nke nsogbu ndị na-akpata, ma nye akụkọ ihe mere eme nke onye ọrịa, enwere ọtụtụ nkọwa maka ihe merenụ: Nnyocha ahụ anụ ahụ hụrụ akpụkpọ akọrọ na ụkwụ ya, yana ntu ndị gbajiri agbaji na ndị doro anya ascites ma ọ bụ njide mmiri. nke kpatara aza aza.
Nke ikpeazu pụtara na TJ nwere mmebi imeju, mana nnwale ọbara ga-egosi na imeju ya na-arụ ọrụ nke ọma yana na ọ nwere hypercalcemia. Hyper pụtara elu. Calce bụ ndebiri nke calcium, nke bụ electrolyte dị mkpa.
Anaemia putara inodu n’ime obara. Nnukwu calcium dị n'ime ọbara. Ọ bụrụ n’ịlele karama vitamin gummy nke TJ riri, ọ nweghị calcium a ga-achọta.
Nne ya gwara onye dibia bekee ahụ na ọ gbụpụtabeghị mmiri ma ọ bụ rijubiga ókè kemgbe erichara nri bekee 150 ọ bụla maka nri ụtụtụ, nke pụtara na enwebeghị ụgbụ nri dị ukwuu na ahụ ya. Ọ na-ese n'elu mmiri ebe ọ bụla n'ọbara ya ma ya mere a ga-achọpụta ya n'ọtụtụ buru ibu. Ihe omuma obara ozo achoputaghi otutu vitamin A rue E na abawanye na ayodiin, zinc, selenium.
Ogologo oge ole ka klaasị nkuzi
Kama nke ahụ, ọ na-egosi na TJ akpọnwụọla, nke dabara na urination ya dị arọ tupu ọ daa na coma, mana ọ na-edugakwa anyị na nkọwa mbụ. Enweghị vitamin n'ime ọbara mgbe ha rụsịrị vitamin gummy 150 pụtara na ha gaara ahapụ ahụ ha na mamịrị. Rinrinụbiga mmanya ókè tupu ị gawa ụlọ mberede nwere ike iburu nke a n’uche.
A na-ekepụta Vitamin B na C dị ka mmiri soluble, m. H. ha na-agbaze na mmiri, na-etinye uche na akụrụ, ma pụta na mmamịrị.
Agbanyeghị, nke a enweghị isi na vitamin A na D, nke bụ vitamin ndị nwere ike ịba abụba, mmanụ d na n'ihi na mmanụ anaghị agwakọta na mmiri, enweghị ike iwepụ vitamin ndị a. Ndị mmadụ anaghị amịrị abụba. Ya mere, ọ bụrụ na ha anọghị n'ọbara TJ, ha enweghị ike ịpụpụ ya ma ọ gbụpụghị ma ọ bụ kọwaa ya na nke ahụ. Dabere na oge ahụ, ọ pụtara na vitamin A na D ga-ezobe n'otu akụkụ ya.
Ma olee akụkụ ọ nwere ike ịbụ? Ọ gaghị abụ akwara n'ihi na ọ bụ anụ ahụ na - ejide mmiri nke na - anaghị agwakọta nke ọma na abụba; ọ pụghị ịbụ obi n'ihi na nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwara; ọ nwere ike ịbụ ụbụrụ na akwara, ebe ọ bụ na ndị a bụ abụba 60%, mana iji nweta vitamin ga-ebu ụzọ banye n'ọbara, nke ha na-emeghị. Ma n'ihi na TJ riri vitamin ahụ, gwọm ahụ si n'afọ ya kwaga na eriri afọ ya ma banye n'ime imeju ya. Ihe na-emerụ ahụ na ihe ịrịba ama anụ ahụ nke ascites.
Nke a na-egosi na TJ na-arịa hypervitaminosis ma ọ bụ ya kpatara mmebi imeju ya, hypercalcemia na ọkpụkpụ agbaji. Transjugular biopsy biopsy, nke etinyere catheter site na akwara jugular, site n'obi na gbadaa n'ime imeju maka nlele, na-achọpụta na TJ nwere ọnụọgụ mkpụrụ ndụ buru ibu buru ibu, nke pụtara na o nwere vitamin A. chịkọtara n'imeju ya ruo oge ụfọdụ, mkpụrụ ndụ na-aza aza, na-anwụ anwụ, anụ ahụ okike na-akpụkwa n'imeju.
Nke a pụtara na TJ na-enwe ọrịa hepatotoxicity nke vitamin A yana na vitamin nke 30-40 ọ na-eri dị ka swiiti kwa ụbọchị kemgbe ọ bịarutere America ji nwayọ na-ebibi imeju ya. Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na mgbe ị na-eri nri vitamin gummy maka nri ụtụtụ, TJ riri 187,000 IU nke vitamin A n'otu oge. 'D ga-eri àkwá 720. Ọ bụrụ na ọ nwere nri vitamin A ahụ ugboro 63 a na-atụ aro ya kwa ụbọchị yana ọ na-eri mkpụrụ 30-40 kwa ụbọchị, nke bụ oge 20 a na-atụ aro kwa ụbọchị na mgbakwunye na nri ndị ọzọ, anyị nwere ike kwubie na imeju ya imebi bụ n'ihi hypervitaminosis A n'ihi na ezighi ezi ingestion nke gummy vitamin dị ka swiiti.
Vitamin A, bụ retinol nke a na-egosi, egosila na ọ ga-emegide nsogbu nke vitamin D, nke pụtara na ọ bụrụ na A karịrị akarị na ahụ, mgbe ahụ mmetụta nke D. Mana ka anyị laghachi aha hypercalcemia na TJ. Nnukwu calcium dị n'ime ọbara.
Vitamin D na-arụ ọrụ site na ịbawanye nsị nke eriri afọ nke calcium, nke pụtara na ọ na-eme ka ogo calcium dị na ahụ site na nri nri dị elu. TJ erighi nri calcium ọzọ na vitamin ya, ma ọ riri nkeji 75,000 nke vitamin D, oge 188 a tụrụ aro kwa ụbọchị. Ma ọ bụrụ na vitamin A na-egbochi mmetụta nke vitamin D ma gbochie calcium ịmịnye ya na eriri afọ, mgbe ahụ isi iyi nke hypercalcemia ga-esite na ihe na-agbaze ma na-agbari na ahụ ya, ụlọ ahịa kachasị ukwuu nke calcium dị egwu na ọkpụkpụ.
Vitamin A na-etinye ahụ n'ahụ n'ime arụ ọrụ retinoic acid, nke a maara iji kpalite nguzo osteoclast. Ọkpụkpụ, na ụyọkọ, site na Greek clastos oge ochie, nke pụtara agbaji. Mkpụrụ ndụ ndị na-eme nwayọ wee jiri nwayọ gbarie ọkpụkpụ ahụ ma hapụ kesia ndị fọdụrụ n'ime ọbara g na TJ ebe ọ malitere n'amaghị ama na-eri nri vitamin dị ka swiiti ruo mgbe ọ rutere n'ọnụ ụzọ ebe ọdịda dị mfe nke mere otu tupu ahụike nwa nwoke 14 dị afọ kwesịrị ' t abụwo nsogbu, ọtụtụ ọkpụkpụ na ogwe aka ya mebiri ihe ngosi ụwa nke oge a.
E mewo ka mmiri ara ehi nwee vitamin D iji gbochie rickets, ma ọ bụ ime ka ọkpụkpụ dị nro, bụ́ nke pụrụ ịkpata nrụrụ na-adịgide adịgide n’ebe ụmụaka nọ. Ebe ọ bụ na edozighị vitamin D ịbawanye nsị nke nsia na ịbawanye ụba, ndị British Pediatric Association na 1956 hụrụ 204 ikpe nke hyperkalemia na ụmụ ọhụrụ ndị mmanya na-egbu na vitamin D site na ị drinkingụ mmiri ara ehi. Nke a butere ọdịda nke ọma, nke nwere ike igbochi uto ha oge niile.
Ihe omumu banyere oria ojoo gosiputara na Sweden na Norway, ihe oriri vitamin A kariri ugboro 6 karie na ndida Europe. Ndị mmadụ nke vitamin A riri ihe karịrị 5,000 nkeji kwa ụbọchị nwere ọkpụkpụ ịnweta njupụta 10% na-erughị na ihe ize ndụ ha nke mgbaji ọkpụkpụ hip karịrị okpukpu abụọ nke onye riri ihe na-erughị 5,000 nkeji kwa ụbọchị. Na 1597, onye nyocha Dutch kwụsịrị na Nova Zembla na Canada nke oge a ka ọ na-anwa iru Indonesia.
Ndị ikom ya riri imeju polar bear, akpụkpọ ahụ ha malitere ịdapụ n'oge oyi mgbe ha dara ọrịa. Na 1942 achọpụtara na vitamin A bụ ihe na-egbu egbu na akàrà na imeju polar, ebe ọ bụ na gram 100 nke imeju na-eri ihe dị n'agbata 1.3 na 1.8 nkeji nke retinol ma e jiri ya tụnyere nkeji 50,000 na imeju herbivore.
Na Kenya, akuko Homo Erectus, nke edere na ihe dika 1.5 nde afo gara aga, ka achoputara na o nwere okpukpu okpukpu ukwu nke nwere oghere nke na-eweputa oria ocha, nke aruru ala nke nwere ngosiputa nke okpukpu nke okpukpu, nke na emebi emebi usoro nke okpukpu. nke vitamin A nsi, na mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke ọkpọ dabara na a hypothetical abawanye na oriri oriri na ụmụ mmadụ mbụ. Ha aghọtaghị nke anụmanụ imeju dị mma iri, nke pụtara na usoro nke imeju mmebi, ascites, hypercalcemia na ọkpụkpụ ọnwụ na proto-a bụ otu ihe ahụ na TJ.
Anyị nwere ike idozi ọkpụkpụ agbajiri agbaji. Anyị nwere ike ịdụ ya ọdụ na mgbanwe omume oge ga-eme ka ọ ghara ịda mba. Anyị nwere ike igbapu ascites ya na diuretics, nke spironolactone na furosemide na-abawanye nsị sodium na akụrụ site na usoro dị iche iche yana ka mmiri na-aga na gradient ịta ahụhụ, mmiri na-aga sodium iji kpalite natriuresis; n’agbanyeghi, onweghi uzo anyi g’esi wepu vitamin A ozugbo n’ime imeju ya.
Ọ ga-anagide ihe mgbu nke nnukwu na-adịghị ala ala hypervitaminosis A ruo mgbe imeju ya nwere oge zuru ezu iji wepụ ihe ndị retinyl esters. Enweghị akụkụ dị mma maka iwepụ nsị si ahụ karịa imeju. Nchọpụta ụmụaka n'adịghị akwụkwọ m, ọ bụghị mpaghara m na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, mana ụmụ li ke TJ bụ ọdịnihu anyị ma achọrọ m itinye aka na nke ahụ.
Ya mere, a ga-enye ụfọdụ n'ime ego sitere na akwụkwọ nkwado a na rinlọ Ọgwụ nke Shriners maka Childrenmụaka, mụ na onye ọrụ ibe m ga-akwụ ụgwọ ahụ. Ekele maka Audible maka ịkwado isiokwu a, Audible na-enyere gị aka ịnụ ọtụtụ akwụkwọ site na ịgbanye ngwaọrụ na-enweghị nhịahụ ma bulie aka nri ebe ị kwụsịrị, ma na ekwentị gị, site n'ụgbọ ala gị, site na mbadamba nkume, ma ọ bụ n'ụlọ Site na Amazon Echo, ị nwere ike na-agagharị na ibu nke akwụkwọ (aka na anya n'efu) mgbe ị na-eme ihe ọ bụla. Maka akwụkwọ m na-akwụghị ụgwọ, ahọpụtara m ezinụlọ nke enweghị ike ihi ụra, Mystery Ahụike site n'aka DT MaxMax.
Ọ na-enye ìhè banyere akụkọ ihe mere eme nke prions na ọrịa Kuru. Nke a bụ ọrịa na-efe efe nke na-eduga ụra ehighị ụra nke ezinụlọ, nke a na-eri oghere n'ime ụbụrụ onye ọbịa. Agaghị m emebi ndị ọzọ maka gị ya mere gaa na Audible Dot com Slash Chubbyemu ma ọ bụ dee 'Chubbyemu' na 500500 maka akwụkwọ n'efu na ibido.
Videomaking abụghị ọrụ m oge niile mana anaghị m eme nke a maka ego, mana ọ bụ n'ezie na anaghị m eme nke a maka ịchekwa ma anaghị m eme nke a maka ego, mana enwere ihe mgbakwunye ndị ọzọ enwere m ike ịnweta na achọrọ m inye aka na ihe ka mma, Achọrọ m ime ihe ọma na mgbakwunye ndị m na-eme ugbu a. ma ọ bụ dee 'Chubbyemu' na 500500 iji nwalee Audible. ma ọ bụ dee 'Chubbyemu' na 500500 ka ịmalite.
N'ihi na TJ na nne ya ka anyị gara leta na United States, anyị amaghị ihe mere ha. Na nhapu, ntu na akpụkpọ ahụ malitere idozi ma ascites belatara, na-atụ aro mgbake na mmebi imeju. N'ịghọta na gummies ndị ọ na-eri abụghị swiiti kama ọ bụ n'ezie vitamin, ihe mgbakwunye mgbakwunye ahụ kwụsịrị ozugbo.
A na-eme atụmatụ nhọpụta, mana onye ọrịa anaghị edebe ya. Agbanyeghị na akara ikpeazụ nke TJ amabeghị, oge ikpeazụ anyị hụrụ ya ọ nọ n’ụzọ ziri ezi maka mgbake. Daalụ maka ikiri.
Ledo onwe gị anya. Ma dị mma.
Ọ kwesịrị ka m rie nri ụtụtụ ma ọ bụrụ na m rie nri abalị n'abalị gara aga?
Definitelychọghị ịmalite usoro ị aụbiga mmanya ókè nke iribiga nri ókè na ị-na-eri nri. Nnyocha na-egosi na ndị mmadụ abụọrieahụike ma rụọ ọrụ ka mmamgbe oleharie nri ụtụtụ. Gịnwere ikenwee ihe na-ebu ọkụnri ụtụtụka ọ dị na mbụọ bụrụị na-eteta n'ụra, ma ahapụla ya kpamkpam!29 nke 2013 g.
Kwụsị ịhapụ nri ụtụtụ. Ka ị kwesịrị ịhapụ iri nri ụtụtụ? Anyị niile anụla na nri ụtụtụ bụ nri kacha mkpa ụbọchị, mana ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na ndị egwuregwu dịka Terry Crews bụ ndị kwere ekwe siri ike ịghara iri nri ụtụtụ. Ya mere, onye ziri ezi; nri ụtụtụ ọ dị mma ka ọ dị njọ? M kwụsịrị iri nri ụtụtụ ruo izu abụọ iji chọpụta; Enweghị m ike iri nri tupu iri na abụọ m rie nri ehihie.
N'ihi na dị ka ogologo dị ka m na-echeta m riri nri ụtụtụ kwa ụtụtụ. Ma amakwaara m otutu ndi n’agaghi eri nri ututu. Na na arụ ọrụ dị ukwuu maka ha.
N'ikwu eziokwu niile, echeghị m na ọ ga-aga nke ọma n'ihi na m ga-ebili site na isii ruo elekere iri na isii, elekere isii zuru ezu na-enweghị eri nri. Ọ dị iche na ihe m na-emebu ma ọ nwere ike isi ike, tumadi na mbido. Ọkara gị nwere ike ikwu maka ịgaghị eri nri ụtụtụ.
Ma, ọ dịrịghị gị mfe ịgbanwe ihe ị na-eme kwa ụbọchị. Achọrọ m ịchọpụta ma ndụ m ọ ka mma ka ọ kakwuo njọ ma enweghị nri ụtụtụ. Taa bụ ụbọchị mbụ m n’ejighị nri ụtụtụ na m ga-asị na ọ gara nke ọma.
O juru m anya na agụụ anaghị agụ m mgbe m tetara. Emere m kọfị, rie nri ehihie maka ụbọchị ahụ ma ọ naghị adị m ka m chọrọ nri ụtụtụ. M bụ ezigbo ọrụ n'aka.
Ọ bụ ugbua etiti ehihie na ọ dị m ka m rie nri. Achọghị m jinxx ya, mana m nwere nchekwube maka izu ahụ, yabụ nri ụtụtụ wednesday na m ga-ekwu na ọ ga-abụ obere ihe isi ike. Ee ee, ọ garaghị nke ọma.
Ezigbo agụụ na-agụ m n’elekere 10:30 ma ọ bụ 11 nke ụtụtụ kwa ụbọchị.
Afọ m na-etolite ma m na-amalite ịhụ ma ọ bụ na-anụ nri nri n'ọfịs ndị ọzọ nwere. Ma ọ siri ike karịa mgbe m tetara. Ama m na ọ dị mma, nke ahụ abụghị nsogbu.
Mana mgbe ị bụ onye na-anwa iri nri, gbalịsie ike iri obere, gbalịa iri obere nri, ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka mgbe ịnwere ọtụtụ nhọrọ n'ọfịs nwere ike ịdị ngwa ma ọ bụ dị mfe. Enwere m ọtụtụ nri dị iche iche na tebụl m, ihe ndị ahụ niile m na-enweghị ike iri ruo mgbe anyị risịrị nri ehihie. Ma mgbe ahụ, m na-eche, 'Oh, ị nweghị ike iri nri ahụ.' Ma ọ na-anọdụ ala ebe ahụ ma na-ele m anya, echere m na m nwere ike ịme ya n'izu ahụ mana enwere m obere ụjọ banyere ngwụsị izu, na-eteta na 6 am ma ghara iri nri ruo mgbe 12 bụ ogologo oge.
Kedu ihe kpatara m ji achọ nri ụtụtụ mgbe ọtụtụ ndị nwere ike ibi na-enweghị ya? ọ na-aga ebe a n'ezie? Agwawo m Dr. Peterson, onye ọkà mmụta sayensị na Mahadum Alabama, ka m gwaa ya. Ya mere, ihe m chere mere mgbe ị na-eri nri ụtụtụ, na ihe kpatara ya ji gbagwojuru anya, ọ nweghị ụzọ ọ bụla isi gbanye nri ụtụtụ n'ezie. Actually nwere ike ịchịkwa shuga ọbara ka mma n'ụtụtụ ma ị na-agbari nri gị ntakịrị ntakịrị n'ụtụtụ yana ọkụ. wepụ onwe gị ntakịrị calorie ma ọ bụrụ na ị rie n'ụtụtụ.
Ya mere, ihe akaebe niile a na-egosi na ụtụtụ bụ oge kacha mma iri nri. Yabụ ọ bụrụ na ụtụtụ bụ oge kacha mma iri nri, ọ ga-ewute m ịfe nri ụtụtụ? iji maa aka n’enweghi isi? N'akụkụ ihu, anyị mụtara n'ime afọ iri gara aga na ọ dị ka ibu ọnụ dị ogologo dị mma maka ahụike gị. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ị nwere agụụ agụụ.
Na agụụ agụụ a na-agụ ihe ị na-eme ma ọ bụ n'àgwà gị. Ihe nke a pụtara na oge dị mkpirikpi, ọ bụrụ na ị naghị agụkarị nri ụtụtụ ma wee pụọ na nri ụtụtụ na mberede, ọ dị mkpa ka ị merie ịdị umengwụ a nke ịgbanwe usoro hormone agụụ gị. N'ihi na agụụ agụụ gị na-ekwu, 'Ọ dị mma, nke ọma, ị na-erikarị nri ụtụtụ.' Ma ugbu a, ị ga-egwu ya ka m wee mee gị ezigbo agụụ.
Oge ọ bụla ị nwere usoro iri nri oge niile wee gbanwee nke ahụ, n'agbanyeghị ụdị nri ị na-eri, ị na-abụ mgbochi mbụ ebe ọ na-esiri gị ike na mbido, mgbe oge gachara ị na-agbanwe. Ma eleghị anya, usoro ihe ọhụrụ m dị njọ karịa nke ochie m. O meela ihe dị ka otu izu na ọkara.
Ekwesịrị m ịsị na ọ na-adị mfe nri ụtụtụ ngwụsị izu kwesịrị ịbụ nro. Mana n’ezie ọ dị mfe karịa n’ihi na m tetere n’ụra ma emeghị m oge dị ukwuu n’etiti ibili na n’ehihie dịka n’ụbọchị ọrụ. Ma nri ụtụtụ ka na-agụ m.
Ọ na-atọ m ụtọ iri nri ụtụtụ na ihe m ga-eri n'ụtụtụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na agụụ anaghị agụ m nke ukwuu, echere m na m ga-echefu akụkụ ahụ. Ihe a niile mere ka m chewe mkpa nri ụtụtụ dị. Ọ dị ka nri ụtụtụ bụ naanị ihe a na-eme.
Ọ bụ naanị ụkpụrụ m, enwere m mmasị na ya ma yabụ m ji ya. Mgbe otu izu na ọkara na-enweghị nri ụtụtụ ọ dị ka ọ dị m ka emesịrị m eji usoro ọhụụ m. Enwere m ike bụrụ onye anaghị eri nri ụtụtụ, mana agaghị m atụ anya ya.
Ọ bụ Friday. Na echi m nwere ike iri nri ụtụtụ ọzọ. Mgbe izu abụọ m chọpụtara na m nwere ike ime na-enweghị nri ụtụtụ ma na-adị ndụ.
Mana nri ụtụtụ na-agụ m. Agaghị eri tupu 12 bụ ihe siri ike, ọkachasị na nri niile ahụ n'ọfịs, ọ na-etinyekwa ọnọdụ m ala maka ụbọchị ahụ, mana echeghị m nnukwu mgbanwe na arụmọrụ m ma ọ bụ ọbụlagodi ike m tupu ma ọ bụ mgbe nri ehihie. Ibu ibu m anọgidewo n'otu.
Nri ụtụtụ adịghị njọ maka gị, mana ọ dịghịkwa mkpa. Ikwesiri ime ihe kacha mma na nri gị. Enweghị m enyemaka na-enweghị nri ụtụtụ na enwere m ike ịmepụta usoro dabara na oge m na mkpa kwa ụbọchị.
Tupu ịmalite ihe ịma aka a, m hụrụ nri ụtụtụ n'anya ma chee na m kwesịrị ya ịmalite ụbọchị m. Ugbu a ọ naghị adị m otú ahụ. Nri ụtụtụ ka na-amasị m ma na-aga n'ihu na-eri ya, mana anaghịzi m atụkwasị ya obi otu m na-adịbu; ọ na-aghọ iri nri ụtụtụ ann.
Mana Dr. Peterson rụtụrụ aka na ọ ka mma iwelata oge enyere gị nri kwa ụbọchị karịa ị ga-ebelata nri ụtụtụ. Achọpụtala ụzọ abụọ dị iche iche iji rie oge iri nri nke gosipụtara na ọ bara uru maka oge ahụ.
O yikwara ka ọ ga-eri nri na ụbọchị agbamakwụkwọ nke ụbọchị ahụ, kwuo na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ. dịkwa mma maka ahụike gị.
Enwere otutu ihe akaebe na obuna na igaghi agbanwe oge nri ụtụtụ, nri ehihie, na nri abalị ma ọ bụrụ na ị sie nri opekata mpe gị, rie nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ehihie tupu mgbe ahụ, ị ​​ka nwere ike irite ọtụtụ uru na ya. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-enwe mmasị iri nri ụtụtụ. Nke ahụ dịkwa mma maka ha.
Ma ekwela ka mmadu gwara gi ka tufuo ubochi ma oburu na i rie nri ututu. Nri kachasị mkpa n’ụbọchị dabere n’onye ọ ga-eri; nke a bụ ihe nri ụtụtụ kwesịrị ịdị.
Ọ dị mma iri nri ụtụtụ na isi ụtụtụ?
N'ihe banyere nri ahụike, mgbe ị na-eri nri gị dị mkpa dị ka ihe ị bụna-eri nri. Oge kacha mma iji nwetanri ụtụtụdị n'ime awa abụọ nke ibili. 'Ngwa ngwarie nri ụtụtụmgbe ị tetachara, ọ ka mma na ọ bụ maka metabolism gị, 'ka Larson na-ekwu.Ọkt 25 2018
Ha kwuru na nri ụtụtụ bụ nri kacha mkpa n’ụbọchị ahụ. Ọzọkwa, ụkpụrụ nduzi nke taa na-atụ aro ka anyị niile rie nri ụtụtụ. Ma, ọ dị mkpa karịa nri ndị ọzọ? Ọ dị njọ ma ị hapụ ịgba nri ụtụtụ? Ihe omumu ohuru di elu emeela ka ha buru okwu banyere ya ma anyi gha lee ha anya ugbua.
Nsonaazụ dị oke ịtụnanya. (elu jingle) Nke mbụ, ka anyị kwuo na ọtụtụ nyocha na-egosi na ndị na-eri nri ụtụtụ na-agbakarị ahụ ike. O yikarịrị ka ị ga-ebu oke ibu ma ọ bụ buru ibu ma nwee obere nsogbu nke ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala.
Agbanyeghị, a na-akpọ ihe ọmụmụ ndị a ihe ọmụmụ mmụta nke enweghị ike igosipụta ihe kpatara ọ bụla. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ihe ọmụmụ ndị a na-egosi na ndị na-eri nri ụtụtụ nwere ike ịdị mma karịa, mana ha enweghị ike igosipụta na nri ụtụtụ n’onwe ya kpatara ya. Ugbu a enwere ike ịbụ ndị na-eri nri ụtụtụ nwere ụdị ndụ ndị ọzọ dị mma nke nwere ike ịkọwa nke a.
Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eri nri ụtụtụ na-enwekarị nri mara mma karịa ma na-adịkarị ala karịa ndị na-eri br. mafere nri ụtụtụ. N’aka nke ọzọ, ndị na-eri nri ụtụtụ na-esekwu sịga, na-a moreụkwu mmanya na-aba n’anya, na-emekwaga ahụ obere.
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na ihe kpatara ndị na-eri nri ụtụtụ ji enwekwu ahụ ike, na nkezi, ọ bụghị n'ezie na ha nwere nri ụtụtụ n'onwe ya, ọmụmụ ihe dị elu nke a na-akpọ usoro ọmụmụ enweghị usoro nwere nyocha ọ dị nso nso nso a ma ọ dị ezigbo mkpa iri nri ma ọ bụ ịhapụ nri ụtụtụ. Iri nri ụtụtụ anaghị akpali metabolism. Fọdụ ndị na-ekwu na iri nri ụtụtụ na-eme ka ike gwụ gị, mana nke a bụ akụkọ ifo.
Ndị a na-ezo aka na mmetụta ọkụ nke nri, nke ahụ bụ mmụba nke calorie ọkụ nke na-eme mgbe iri nri. Agbanyeghị, ihe dị mkpa maka metabolism bụ ngụkọta nri ekesara ụbọchị niile. Ọ baghị uru n ’oge ma ọ bụ ugboro ole ị na - eri nri, ọdịghị ịhe dị iche na kalori gbara ihe karịrị awa iri abụọ na anọ n’etiti ndị na - eri ma ọ bụ na - eri nri ụtụtụ.
Ikwu nri ụtụtụ anaghị ebute ibu ibu. Ikwu nri ụtụtụ na-echekarị karịa ndị na-eri nri ụtụtụ. Ozizi a na-akpata ihe a na - eme ka nri ụtụtụ na - eme ka agụụ na - agụ gị ma na - eri nri karịa ma na - eme nri nri na - enweghị isi ụbọchị niile.
Ọ bụ eziokwu na ịmacha nri ụtụtụ na-eme ka ndị mmadụ na-enwe agụụ na-erikwu nri na nri ehihie. Agbanyeghị, nke a ezughi iji overcompensate maka maka iri nri ụtụtụ. N'ezie, ụfọdụ ọmụmụ egosila na ịhapụ nri ụtụtụ nwere ike belata oriri caloric zuru oke site na ihe dị ka calorie 400 kwa nri niile na nri gị kwa ụbọchị.
N'ụzọ na-akpali mmasị, a nwalere / iri nri ụtụtụ a nwalere n'ụzọ dị omimi n'ọmụmụ njikwa enweghị usoro. Nke a bụ ọnwa anọ iji atụnyere aro maka iri ma ọ bụ ịfe nri ụtụtụ na 309 ndị buru oke ibu na ndị buru oke ibu. Mgbe ọnwa anọ gasịrị, ọ nweghị ọdịiche dị n'etiti ndị otu ahụ.
Ọ baghị uru ma ndị mmadụ rie nri ụtụtụ. Ikwu nri ụtụtụ nwedịrị ike ịba uru. Ighafere nri, ọkachasị nri ụtụtụ, bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ usoro iri nri na-enweghị isi.
Ebumnuche ịghara iri nri mgbe anyị risịrị nri abalị wee kwụsị nri ụtụtụ echi nke ụtụtụ ma nwee nri mbụ gị maka nri ehihie pụtara na ị buru ọnụ maka oge 16. Nnyocha ọhụrụ dị iche iche na-egosi na ibu ọnụ oge niile dị irè na mbenata oriri caloric zuru oke, ịdị na-ebuwanye ibu, ma melite ahụike metabolic. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụghị maka onye ọ bụla na-ebu ọnụ n'etiti oge na mmetụta yiri ka ọ dịgasị iche site n'otu onye gaa na mmadụ.
Ihe akaebe doro anya, ọ dịghị ihe pụrụ iche gbasara nri ụtụtụ. Ewezuga bụ ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị kwesịrị iri nri ụtụtụ n'ihi na ahụ na ụbụrụ na-eto eto chọrọ calorie dị elu. Maka onye ọ bụla ọzọ, nhọrọ onwe onye dị mkpa n'ezie.
Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị n'ụtụtụ ma ị na-enwe nri ụtụtụ, rie ya. Ọ bụrụ na agụụ anaghị agụ gị n’ụtụtụ, erila ya. Ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, biko nye anyị mkpịsị aka aka. Ọ bụrụ na ịnwebeghị, pịa bọtịnụ uhie uhie n'okpuru isiokwu ka ịdenye aha na Youtube Nutrition Authority Nutrition maka isiokwu ọhụrụ ozugbo ewepụtara ha. (egwu na-ada ụda)
Ọ kwesịrị ka m hie ụra agụụ?
Hungryra ụra n'agụụnwere ike ịnọ na nchekwa ma ọ bụrụhaala na ị na-eri nri kwesịrị ekwesị ụbọchị niile. Izere nri abalị ma ọ bụ nri abalị nwere ike inye aka izere uru bara ụba na BMI na-abawanye. Ọ bụrụ na ị bụagụụ na-agụna ị gaghị enwe ikegaa lakpuo, I nwere ike iri nri ndị dị mfe ịgbasa na ịkwalitehie ụra.24.09.2020
Kedu nri a na-erikarị n'ụtụtụ?
Nri ụtụtụ. Nri ụtụtụ bụ nke mbụnrinke otu ụbọchị, ọtụtụ mgberiena mbidoutututupu ịmalite ọrụ ụbọchị ahụ. Fọdụ kwenyere na ọ bụ ihe kachasị mkpanrinke ụbọchị. Okwu nri ụtụtụ na-ezo aka n'ụzọ nkịtị na-emebi oge ibu ọnụ nke abalị gara aga.
Kedu oge na-egbu oge maka nri ụtụtụ?
9 ma ọ bụ 10am bụakaha maka nri ụtụtụ. Otu n'ime ihe kpatara agụụ ji agụ gị n'ụbọchị ị wepụtara oge iri nrinri ụtụtụmmalite bụ na enyere gị metabolism. Ebumnuche, anyị kwesịrị iri nri site na elekere asaa ma ọ bụ asatọ iji mee ka sistemu anyị gaa kwa ụtụtụ. Nọvemba
Ọ dị njọ ịghara iri nri ruo elekere ise nke mgbede?
Ọ bụghị. Ọ bụdịkwa mmaka naanịriemgbe 5 pm ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị, mana ịkwesịrịrieezu iji nweta nri niile ị chọrọ. “Agaghị mna-eri nri”Mgbe otu ụbọchị zuru ezu nken'agaghi eri nri adighinye gị nri ị chọrọ.
Oge 10 agafeela nri ụtụtụ?
Oge 11 na-egbu oge maka nri ụtụtụ?
.B.nri ụtụtụn'ozuzu nwere stampụ oge maka nri ụtụtụ, agbanyeghị nke ahụ bụ n'ihi oge imirikiti ndị mmadụ na-eteta ma bido ụbọchị ha. M ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị na-eteta gburugburu11ammgbe ahụ oge ekwesịghị ịdị mkpa. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị biliri tupu nke a, m ga-akwado gị ịnwe nke gịnri ụtụtụmee elu mee.